Nintendo ၏ Pikmin သည် iOS သို့တိုးမြှင့်သည့်အဖြစ်မှန်အဖြစ်ကစားလိမ့်မည်။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Nintendo ၏ Pikmin သည် iOS သို့တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်လာနေသည်
Ignacio Sala | 24/03/2021 12:00 | အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ
Nintendo နှင့် Niantic (ပိုကီမွန် GO ကိုဖန်တီးသူ) သူတို့ကကြေညာ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ iOS နဲ့ Android နှစ်မျိုးလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် Nintendo's Pikmin franchise ကိုအခြေခံထားတဲ့တိုးပွားလာတဲ့ဂိမ်းအသစ်တစ်ခု။ ကြေညာချက်ထဲမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးရဲ့အဆိုအရ, ဒီလျှောက်လွှာနှင့်အတူသူတို့လမ်းလျှောက်စေလိုကြသည် ပျော်စရာအတွေ့အကြုံ.
အဆိုပါ Pikmin ဂိမ်းဂိမ်းတစ် ဦး နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရမယ် နည်းဗျူဟာနှင့်ပဟေgameိဂိမ်းစီးရီး အရာအတွက်ကစားသမားအပင်တစ်မျိုးကိုညွှန်ကြား? ၄ င်းတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းကိုတားဆီးသောအတားအဆီးများကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့ဝန်းကျင်ရှိအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဂိမ်းသည်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်ကိုအသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး Niantic ၏အဆိုအရ Pikmin ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုသည် လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ပို၍ ပျော်ရွှင်စေမည့်ချဉ်းကပ်နည်း။
Nintendo မှ Shigeru Miyamoto က Niantic ၏နည်းပညာကသင့်အားကမ္ဘာကိုတွေ့ကြုံခံစားစေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားသည် ကျနော်တို့က Pikmin နှင့်အတူအသက်ရှင်လျှင် ငါတို့ပတ်ပတ်လည်။
Niantic ၏တိုးချဲ့ထားသောလက်တွေ့နည်းပညာကြောင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင် Pikmin နှင့်အတူနေထိုင်သကဲ့သို့ခံစားစေသည် လမ်းလျှောက်။ ပျော်စရာကောင်းသောခေါင်းစဉ်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်သည်ရိုးရာဂိမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံအသစ်များကိုလူများအားပေးရန်ဖြစ်သည်။ Pikmin နှင့်ဤ app သည်သင်၏ဘဝတွင်အဖော်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
developer သည်အသုံးပြုသူများကိုခွင့်ပြုသည် မှတ်ပုံတင်ပါ သွားရန် ပိုမိုသိရှိလိုပါက စျေးကွက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲချဉ်းကပ်အဖြစ်ဒီခေါင်းစဉ်အကြောင်းကို။
နာမည်ကြီးPokémon GO၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောရောက်ရှိလာသည့်ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်လာသည့်ပထမဆုံးတိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်ခေါင်းစဉ်အပြင် Niantic ကဲ့သို့သောအခြားခေါင်းစဉ်များကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards ယူနိုက်တက်, စျေးကွက်အတွက်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဘုန်းအသရေမရှိဘဲလွန်ခဲ့သောခေါင်းစဉ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ » Nintendo ၏ Pikmin သည် iOS သို့တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်လာနေသည်
tvOS 14.5 တွင်အပြောင်းအလဲများသည် Apple TV အသစ်ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြံပြုသည်
Apple သည် Pages, Numbers နှင့် Keynote ကိုစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့် update လုပ်သည်